Isingeniso kwiiLwimi eziLwimi eziMibini
i-claporte / E + / Getty Izithombe
Izichazili ezimbini zezixhobo ziyimfuneko ebalulekileyo kubafundi beelwimi zontathu, kodwa ukuzisebenzisa ngokuchanekileyo kudinga okungaphezulu nje kokukhangela igama ngelilwimi olunye kwaye ukhetha inguqulelo yokuqala oyibonayo.
Amaninzi amaninzi anelungelo elilinganayo nelinye ilwimi, kubandakanywa izifaniso, iirejista ezihlukeneyo kunye neendawo ezahlukeneyo zokuthetha . Iimpawu kwaye usethe amabinzana angenakwenzeka kuba kufuneka ufunde igama eliza kukhangela. Ukongezelela, izichazi ezimbini zeelwimi zisebenzisa iziqulatho ezizodwa kunye nezifomfayile, i- alfabhethi yefowuni yokubonisa ukubiza amagama, kunye nezinye iindlela zokubonelela ngolwazi oluninzi kwisixa esincinci sendawo. Umgca wenkalo kukuba kukho ezininzi kwiincwadana ezichazileyo ngaphandle kokuhlangabezana nelihlo, ngoko jonga la maphepha ukuze ufunde indlela yokufumana eyona nto ingakumbi kwisichazi magama sakho.
Khangela amazwi angabonakaliyo
Izichazi-magama zizama ukugcina indawo xa kunokwenzeka, kwaye enye yezona ndlela ezibalulekileyo abazenzayo ngoku kungaphindaphindi ulwazi. Amagama amaninzi anamafomu angaphezu kweyodwa: izibizo zinokubodwa okanye ngamanye amaxesha (kwaye ngamanye amaxesha amadoda okanye amabhinqa), izichazi zinokuthelekiswa kwaye zincinci, izenzi ziyakwazi ukudibaniswa ngamaxesha ahlukeneyo, njalo njalo. Ukuba izichazili zazifuneka ziluhlule nganye inguqu enye yegama elinye, kufuneka babe malunga namaxesha angama-10. Esikhundleni saloo, izichazili ziluhlu igama elingabonakaliyo: isibizo esisisigxina, isichazi esisisiseko (ngesiFrentshi, oku kuthetha ityununu, ifomini, ngelixa ngesiNgesi lithetha uhlobo olungabonakaliyo, olungagqithisiyo), kunye nesigqithiso sesenzi.
Umzekelo, awukwazi ukufumana isichazamazwi sokungena kwigama lomsebenzisi , ngoko kufuneka ubeke endaweni yokuphela kwesigxina - isistim kunye nomntu - u- eur , kwaye ke xa ukhangeleka kwi- server , uya kufumana ithetha "umgcini wendawo," ngoko umsebenzisi ngokucacileyo uthetha "umgcini we-waitress."
Isalathisi sesininzi sisininzi , ngoko susa kwaye ukhangele phezulu, ukufumana oko kuthetha "ukuluhlaza."
Xa uzibuza ukuba utsho ukuthini ukuthetha , kufuneka uqaphele ukuba abantwana banesenzi isenzo , ngoko kungapheliyo mhlawumbi i- sonner , sonnir , okanye sonnre - jonga abo ukuze ufunde ukuba umfana uthetha "ukukhawula."
Ngokufanayo, izenzi zengqondo, ezifana neasseasse kunye ne- sou souvenir , zibhalwe phantsi kwesenzi, i- asseoir kunye nesikhumbuzo , kungekhona isigammeli esicacisayo sokuthi-kungenjalo, loo ngenelo yayiza kubakho amakhulu kumaphepha!
Fumana igama elibalulekileyo
Xa ufuna ukukhangela ibinzana, kukho iindlela ezimbini: ungayifumana ekungeneni kwegama lokuqala kwintetho, kodwa mhlawumbi iya kubalwa ekungeneni kwegama elibalulekileyo kwintetho. Ngokomzekelo, inkulumo ye-coup (njengesiphumo) ibhalwe phantsi kobuqili kunokuba i- du .
Ngamanye amaxesha xa kukho amagama amabini abalulekileyo kwisigcaziso, ukungena komnye kuya kulandelela enye. Xa sibheka inqaku elithi tomber dans les pommes kwi-Collins-uRobert French Dictionary program, ndaqalisa ukukhangela kwimeko yokungena, apho ndafumana i-hyperlink to appme . Xa ndiqakraza ngaphaya kokungena kwe- pomme , ndifumanise ukuthetha kwam ngokuthi "ukuphelelwa amandla / ukuphuma."
Igama elibalulekileyo ngokuqhelekileyo libizo okanye isenzi-khetha amagama ambalwa uze ukhangele amagama ahlukeneyo ukuze uzive ukuba isichazamazwi sakho sibabala njani.
Ngaphandle kokuba uyazi ukuba yiliphi igama eliza kukhangela, usenomsebenzi wokukwenza. Bobabini isiFrentshi kunye nesiNgesi banamagama amaninzi, okanye amagama ajonga ngendlela efanayo kodwa anentsingiselo enye. Kuphela ngokunyamekela umongo onokukwazi ukuba ungoko wam , umzekelo, ubhekisela "kum" okanye "ubuso buso."
Yingakho ukwenza uluhlu lwamagama ukukhangela kamva akusoloko luyinto efanelekileyo - ukuba awuyibukeli ngokukhawuleza, awuyi kuba nomxholo wokuba ungene kuwo. Ngoko ulunge xa ​​ukhangela amagama njengoko uhambayo, okanye ubuncinci ubhala phantsi kwesivakalisi sonke igama elivela kuyo. Bona iingcebiso ekuphuculeni isigama sakho sesiFrentshi ngolwazi olungakumbi.
Esi sizathu esinye isizathu sokuba abaguquleli abazenzekelayo njengesofthiwe kunye newebhsayithi ayilunganga kakuhle - abahluleki ukuqwalasela umxholo ukwenzela ukugqiba intsingiselo efanelekileyo kakhulu.
Yazi Iingxenye Zakho Zentetho
Amanye ama-homonyms angaba ngamalungu amabini ahlukeneyo entetho. Igama lesiNgesi "ukuvelisa," umzekelo, sinokuba isenzi (Bavelisa ezininzi iimoto) okanye isibizo (Sineziphumo ezilungileyo). Xa ukhangela igama elithi "ukuvelisa," uza kubona ubuncinane ezimbini iinguqulelo zesiFrentshi: isenzi sesiFrentshi sichaza kwaye isibizo siveliswa . Ukuba awuyikunyamekela inxalenye yentetho yegama ofuna ukuyiguqulela, unokuphelisa ngephutha elikhulu lograma kwinto oyabhala ngayo.
Kwakhona, qwa lasele isiFrentshi. Amagama amaninzi anentsingiselo eyahlukileyo kuxhomekeke ekubeni ngaba ngabafana okanye ngabafazi (ndibabiza ngokuba babini-izibizo zesini ), ngoko xa ukhangela igama lesiFrentshi, qiniseka ukuba ukhangele ukungena kweso sesini. Kwaye xa ukhangela igama lesiNgesi, hlawula ngokukhethekileyo ngesini esinikeza ukuguqulela isiFrentshi.
Esi sizathu esinye sokuba abaguquleli abazenzekelayo njengesofthiwe kunye newebhsayithi ayilunganga kakuhle - abakwazi ukwahlula phakathi kwamagama ahlukeneyo ahlukeneyo.
Qonda iifutshane zeDictionary yakho
Mhlawumbi uvele unqamle ngaphaya kwephepha lokuqala okanye ngamanqaku akho kwisichazamazwi sakho ukuze ufumane uluhlu oluchanekileyo, kodwa uninzi ulwazi olubalulekileyo lunokufumaneka apha. Andixeli ngezinto ezifana nezethulo, i-forewords, kunye ne-prefaces (nangona ezo zinokubangela umdla), kodwa kunokuba kuchazwe iindibano ezisetyenziswe kwisichazamazwi.
Ukuze ugcine indawo, izichazili zisebenzisa zonke iintlobo zeempawu kunye nezifinyezo. Ezinye zazo zifanelekile, ezifana ne- IPA (i-International Phonetic Alphabet) , ezona zininzi izichazi-magama zisebenzisa ukubonisa ukuvakalisa (nangona zinokuziguqula ngokuhambelana neenjongo zazo). Inkqubo yakho yesichazamazwi isebenzisa ukucacisa amagama, kunye nezinye iimpawu ukubonisa izinto ezifana nokuxinwa kwegama, i-mute h), amagama asekudala kunye nama-archaic, kunye nokuqhelanisa / ukusetyenzwa kwexesha elichaziweyo, kuya kuchazwa kwindawo ethile ngaphambili isichazizwi. Isichazamazwi sakho siya kuba nolwahlu lweengcamango ezisetyenziswe kuyo yonke, njenge-adj (isichazi), arg (i-argot), i-Belg (i-Belgicism), njalo njalo.
Zonke ezi mqondiso kunye nezifinyezo zinika ulwazi olubalulekileyo malunga nendlela, nini, nokuba kutheni nawuphi na igama elinikeziweyo. Ukuba unikwe ukhetho lwemiqathango emibini kwaye elinye lidala, mhlawumbi ufuna ukukhetha enye. Ukuba i-slang, akufanele ukuyisebenzise kwisimo sobugcisa. Ukuba lixesha leCanada, isiBelgium asikwazi ukuyiqonda. Namela le ngcaciso xa ukhetha iinguqulelo zakho.
Ukunyamekela uLwimi lweeNzululwazi kunye neengcingo
Amagama amaninzi kunye namazwi athetha ubuncinane ezimbini: intsingiselo yangempela kunye nomfuziselo. Izichazi zeziLwimi ziza kubhala uluhlu olulandelayo, olulandelwa yiyiphi imifanekiso. Kulula ukuguqulela ulwimi oluthile, kodwa imifanekiso engumfuziselo iyinto enzima kakhulu. Ngokomzekelo, igama lesiNgesi elithi "eluhlaza okwesibhakabhaka" ngokubhekiselele lithetha umbala - isiFrentshi esilingana nayo i- blue . Kodwa "i-blue" ingasetyenziselwa ukufanekisa ukubonakalisa intlungu, njengokuthi "ukuziva uluhlaza," okulingana ne- vis et leefard . Ukuba ufanele uguqule "ukuba uzive uhlaza" ngokwenene, uya kugqiba nge-nonensical " uzizwa uluhlaza ."
Imithetho efanayo iyasebenza xa uguqulela ukusuka kwisiFrentshi ukuya kwisiNgesi. Inkulumo yesiFrentshi ene-cafard nayo ifanekisayo, ekubeni ngokoqobo ithetha "ukuba ne-cockroach." Ukuba umntu unokutsho oku kuwe, awuyi kuqonda ukuba bathetha ntoni (nangona mhlawumbi unokukrokra ukuba abazange balithobele isiluleko sam indlela yokusebenzisa isichazi magama ezimbini). Ivoir kunye neefarasi yintsomi - inkolelo ongekwazi ukuyiguqulela ngokwenene-yinto efana nesiFrentshi "yokuziva uluhlaza."
Esi sisinye isizathu sokuba abaguquleli abazenzekelayo njengesofthiwe kunye neewebhsayithi azintle kakhulu - abanakukwazi ukuhlula phakathi kolwimi olufuziselayo kunye nolwimi, kwaye bathambekele ekuguquleleni igama ngelizwi.
Uvavanye iinguqulelo zakho: Zama kwiNguqulelo
Emva kokuba ufumene inguqulelo yakho, nangona emva kokuqwalasela umxholo, iinxalenye zentetho, kunye nayo yonke into, kusengumzekelo omuhle ukuzama ukuqinisekisa ukuba ukhethe igama elihle. Indlela ekhawulezayo kwaye elula yokujonga ngayo i-look-up, ekhankanya nje ukukhangela igama ngolwimi olutsha ukuze ubone ukuba iinguqulelo zinikeza ngolwimi lwangaphambili.
Umzekelo, ukuba ukhangeleka "obomvu," isichazamazwi sakho sinokunikela nge- violet kunye nokuthulula njengeenguqulelo zesiFrentshi. Xa ubheka phezulu la magama amabini kwiNgxenye yesiFrentshi ukuya kwisiNgesi, uzakufumana ukuba i- violet ithetha "obomvu" okanye "i-violet," ngelixa utyholisa lithetha "elibomvu" okanye "i-red-violet." Uluhlu lwesiNgesi ukuya kwisiFulentshi lube luhlaza njengelungelo elimkelekileyo elimfusa, kodwa alububomvu - lubomvu ngakumbi, njengombala womntu obushushu.
The lekisa i nkcazo
Olunye uhlobo olufanelekileyo lokujonga ngokuphindwe kabini ukuguqulelwa kwakho kukuqhathanisa izichazi zesichazamazwi. Khangela igama lesiNgesi kwisichazizwi sakho sesiNgesi kunye nesiFrentshi kwisichazamazwi sakho sesiFulentshi kunye nokubona ukuba iinguqu zilingana.
Ngokomzekelo, iLifa leMveli laseMerika linika le nkcazelo "yindlala": Umnqweno onamandla okanye isidingo sokutya. Omkhulu uRobert uthi, ngenxa yesifo , I-sensensation, i-normalement, i-accompagne le need de deer. Ezi ngcaciso zimbini zithetha kakhulu into efanayo, oku kuthetha ukuba "ukulamba" kwaye ixhamla into efanayo.
Eyona nto ibhetele (nangona kunjalo ayisoloko ilula) indlela yokufumanisa ukuba isichazamazwi sakho sobini sikunike inguqu efanelekileyo kukucela isithethi somthonyama. Izichazizi zenza i-generalization, ziphelelwe yisikhathi, kwaye zize zenze iiphoso ezimbalwa, kodwa izithethi zendalo ziguquke ngolwimi lwabo - ziyazi i-slang, nokuba ingaba eli gama lingasesikweni okanye ukuba umntu unobuncwane, kwaye ngokukodwa xa igama elithi " t ithetha ngokuchanekileyo "okanye" ayikwazi ukusetyenziswa njengaleyo. " Izithethi ezithandwayo, ngentsingiselo, iingcali, kwaye zizo ziphendulela ukuba unakho ukungathandabuzeki malunga nesichazi sakho sichaza.
Indlela yokudibanisa isenzi elithi "Parlare" ngesiTaliyane
IsiGama seKharityhulam - ISL Isicwangciso seSifundo
Indlela yokuthi ___ ngesiFrentshi
Abadlali abaphezulu be-MLB baseCuba
Isingeniso ekuFundeni iiVebhu zesiFrentshi
IsiQonga soLwimi lwesiFrentshi: Indlela yokudibanisa iiVebhu zesiFrentshi
Gussuri oyasumi - Iimpawu ezilula zaseJapane
'ITwilight' ngu Stephenie Meyer - Ukuhlaziywa kweNcwadi
Ubundlobongela basekhaya eMelika